ဓါတ်ခွဲခန်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် စွမ်းအားနှင့် လက်ရှိ တိုင်းတာနေသော နည်းပညာများ – PPD Myanmar
GC-FID (Gas Chromatography with Flame Ionization Detector)
○ Fatty acid composition
– Saturated (C8 – C24)
– Monounsaturated (C8 – C24)
– Polyunsaturated (C8 – C24)
ဆီအရောအနှောများတိုင်းတာခြင်း (by Gas Chromatography with Flame Ionization Detector)
ဆီတွင် ပါဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည့် အဆီအက်ဆစ်များဖြစ်သော ပြည့်ဝဆီများပါဝင်မှု နှင့် မပြည့်ဝဆီများ ပါဝင်မှု ပမာဏ အချိုးအစားများသည် စားသုံးဆီ (မြေပဲ,နှမ်း, နေကြာ, စားအုန်းဆီ စသည်) တို့၌ ဆီ တစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုးမတူညီ ကြပါ။ ၎င်းတို့ကို GC-FID အား အသုံးပြု၍ စစ်ဆေး စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ဆီအရောအနှောများ၊ အချိုးအစားများကို သိရှိ နိုင်ပါသည်။
ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ကြွင်းများ တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း (by Gas Chromatography with Electron Capture Detector and MS Detector)
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အပြင် လူအတွက် အဆိပ်အတောက် ဓါတ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော ပိုးသတ်ဆေးများ သည် စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက် ကုန်များတွင် ပါဝင်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးရန်မှာ လွန်စွာ အရေးကြီးပါ သည်။ ၎င်းတို့ကို GC-ECD စက်နှင့် GC-MSD စက်တို့ဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
GC-ECD (Gas Chromatography with Electron Capture Detector).
○ Pesticide residues testing
– Cholorinated pesticides
Pesticides found in Chili Sample
Chromatogram of 20 Organochlorine pesticides standards
Mycotoxin မှိုဆိပ်များ အန္တရာယ် (by High Performance Liquid Chromatography- HPLC)
ကမ္ဘာပေါ်တွင် Mycotoxin မှိုဆိပ်အမျိုးအစား စုစုပေါင်း (၃၀၀) မှ (၄၀၀) အထိ တွေ့ရှိထား ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအား အဆိပ်သင့်စေကြောင်း၊ အဆိပ် သင့် ပြဿနာများမှာ အသဲရောဂါများ၊ ကင်ဆာရောဂါများ၊ အင်္ဂါချို့တဲ့ရောဂါများ၊ အမဟိုမုန်း မညီညွတ်သည့် ရောဂါများ၊ ရောဂါဒဏ်ခုခံအားကျဆင်းသည့်ရောဂါများဖြစ်ကြသည်။ ရောဂါများဖြစ်စေသော အဓိက မှိုဆိပ်များမှာ Aflatoxins, Ochratoxin A, Deoxynivalenol, Fumonisins, Zearalenone တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစားအသောက်များ၌ မှိုဆိပ်ပါဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးအလေးပေး တင်းကျပ်သော နိုင်ငံများမှာ ဥရောပနိုင်ငံများဖြစ်၍ ဒုတိယမှာ လက်တင်အမေရိကန် နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး အလယ်အလတ်တင်းကျပ်မှုမှာ အာရှနိုင်ငံများဖြစ်ကာ အလျှော့ရဲဆုံးနိုင်ငံများမှာ အာဖရိ ကနှင့် မြောက်အမေရိကတို့ဖြစ်ပါသည်။
-Photodiode Array Detector (DAD),
-Post Column Derivatisation (PCX).
ကုန်သွယ်မှုတွင် မှိုဆိပ်ပါဝင်မှု အမြင့်ဆုံးပမာဏ သတ်မှတ်ချက် ကိုစဉ်းစားရာတွင် နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ အဓိက အစားအစာ ဟုတ်မဟုတ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါသည်။ အဓိက အစား အစာ ဖြစ်ပါ က ပမာဏများများ စားကြသည်ဖြစ်၍ အန္တရာယ်ပိုများသောကြောင့် ယေဘူယျ အားဖြင့် စားသုံး သည့် စုစုပေါင်းပမာဏအား ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဖြင့် မြောက်၍ စဉ်းစား တွက်ချက်ကြ ရပါသည်။ စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းများတွင် သီးနှံ ရိတ်သိမ်းချိန်များတွင် မိုးစိုစွတ်ပါက မှိုများအလွန်ကြိုက်သော ရာသီ ဖြစ် သ လို ရာသီဥတု ခြောက်သွေ့ပါက လည်း သီးနှံပင်များ ထိခိုက်အားနဲမှုရှိလေလေ မှိုကပ်လွယ်လေ ဖြစ်၍ အထူး သတိပြုသင့်ပါသည်။ မှိုများ သည် မညီမညာပေါက်ဖွားကြပြီး အလွန်ပျံ့နှံ့လွယ်သောသဘောရှိ၍ ကုန်သွယ်မှုတွင် အထူးသဖြင့် ထိန်းချုပ် ရန် စစ်ဆေးရာတွင် များစွာ ခက်ခဲပါသည်။
Total Aflatoxin tested by Elisa Microplate Reader
အဆိပ်သင့်စေသော သတ္တုဓါတ် ပါဝင်မှု တိုင်းတာခြင်း (by Atomic Absorption Spectrometry)
စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ကြမ်းများ အခြောက်ခံသန့်စင်မှု နှင့် စားသုံးဆီ ထုတ်လုပ်သော စက်ကိရိယာများ၊ စိုက်ပျိုးသော မြေကြီး၊ ဖော့စဖိတ် ပါဝင်သော ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ဆီသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်ကြမ်းနှင့် ဆီသိုလှောင်သောကန်၊ ဂိုဒေါင်များ မှတဆင့် ကုန်ကြမ်းများနှင့် ဆီများထဲတွင် အဆိပ်သင့်စေသော သတ္တုဓါတ်များ (Heavy Metals) ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအဆိပ်သင့်စေသော သတ္တုဓါတ်များသည် ထုတ်ကုန်၏ သက်တမ်းနှင့် တာရှည်ခံမှု တို့ကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေပါသည်။ Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy စက်သည် အဆိပ်သင့်စေသော သတ္တုဓါတ် အနည်းဆုံးပမာဏ (parts per billion-ppb) အထိကို၎င်း၊ Flame Atomic Absorption Spectroscopy (parts per million-ppm) ကို၎င်း၊ ပါဝင်မှု တိတိကျကျ ကို စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါသည်။
Atomic Absorption Spectrometry (AAS) with Graphite Furnace and Flame Photometry
○ Heavy Metals
Oxidative stability test (by Spectrophotometer)
စားသုံးဆီများတွင် ဆီဓါတ်တိုးခြင်းမှ မနှစ်မြို့ဖွယ်သော အနံ့အရသာနှင့် ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ပါအောက်ဆိုဒ်တန်ဖိုး (PV) ကဲ့သို့သော ဆီဓါတ်တိုးနှုန်း(Primary oxidation) ကို တိုင်းတာသည့်နည်းများ အပြင် ဟိုက်ဒရိုပါအောက်ဆိုဒ်၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် တနည်းအားဖြင့် (secondary oxidation products) များဖြစ်သော Conjugated Diene နှင့် Triene များကို ၎င်း၊ (end oxidation products) များဖြစ်သည့် Para-Anisidine ကို၎င်း၊ UV- vis spectrophotometer စက်ဖြင့် လှိုင်းအလျား 234 nm , 268 nm များတွင် တိုင်းတာ သိရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို တိုင်းတာခြင်းအားဖြင့် ဆီ၏လတ်ဆတ်မှု၊ သက်တမ်းကုန်နေမှု၊ လူကိုကင်ဆာ ရောဂါ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင် သော ဓါတ်တိုးပစ္စည်းများ ပါဝင်နေမှု စားသုံးရန် မသင့်တော့ကြောင်း၊ နှစ်ပြန်ကြော်ဆီများကို သန့်စင်၍ အရောင်၊အနံ့၊ အရဿာများထည့်ကာ မသမာမှုများဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းများကို အထက်ပါဓါတ်ပစ္စည်းများအား UV- vis spectrophotometer စက်ဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ဆီအရည်အသွေးများကို သိရှိစေနိုင်ပါသည်။
စားသုံးဆီ၏ အရောင်များသည် Chlorophyll နှင့် Carotenoid ကဲ့သို့သော အရောင်ပေးပစ္စည်းများ ဆီထဲတွင် ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်း အရောင်ပေးပစ္စည်းများကို ဆီသန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်မှ အရောင်ချွတ်ခြင်းအဆင့်တွင် ဖယ်ရှားပစ်လေ့ရှိသည်။ Chlorophyll ပါဝင်မှုသည် ဆီကို အစိမ်းရင့်ရောင် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမက ဆီဓါတ်တိုးခြင်း၏ အစပြုပစ္စည်း အဖြစ်လည်း ပြုမူနိုင်သည်။ ၎င်းပါဝင်မှုများ နေခြင်းမှာလည်း ဆီ၏ သက်တမ်းကို တိုတောင်းစေပါသည်။ Chlorophyll အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်မှုကို UV- vis spectrophotometer စက်ဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။
○ Conjugated Dienes and Trienes
○ Color and Chlorophyll pigments
စာသုံးဆီများ၏ အရောင်များအရေးပါမှု Color ( by Lovibond Tintometer)
Lovibond Tintometer စက်သည် ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် စာသုံးဆီများ၏ အရည်အသွေး အား ၎င်းတို့၏ အရောင်ပေါ် မူတည်၍ ခွဲခြားပေးနိုင်သည်။ စာသုံးဆီအားကြော်/ချက်ခြင်းအတွက် သုံးခြင်းနှင့် ဟင်းရွက်စိမ်းများ ပေါ်တွင်စမ်းစားခြင်းအတွက် သုံးခြင်းကို အရောင်ပေါ် မူတည်၍လည်း စဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ ပထမတန်းစားအဆင့် မြေပဲဆီ၏အရောင်သည် Lovibond အနီရောင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက – ၂ ထက်မကျော်ရ၊ အဝါရောင်သည် – ၂၀ တွင် ရှိနေသင့်သည်။ အသုပ်သုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အနီရောင်- ၁.၅ ထက်မကျော်ရ၊ အဝါရောင် – ၁၅ တွင် ရှိနေသင့်သည်။